IVMI (Umthengisi Phatha yokusungula) - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
IFumax inohlelo lweVendor Management Inventory (VMI) lapho ihlinzeka khona amakhasimende izindlela zokwenza ngcono ukusebenza kwe-Supply Chain. Uhlelo lwe-VMI lubhekele ukugcina uhlu lwazo ngokuya ngemininingwane echazwe ngaphambilini.
Ithimba ligcina umkhondo wokuthi ukutholakala komkhiqizo kuyakhathaza yini kususelwa kumibiko yokuthengisa futhi kuphatha nokugcwaliswa kwesitoko.
Uhlelo lwe-VMI lusizakala uma ikhasimende liphelelwe isitoko noma lidinga isitokwe, njengoba longa izindleko zokugcina kanye nobunzima bokugcina amazinga ezinto.
Okungcono kakhulu, i-VMI Program ibuye ihlanganiswe nohlelo lokulethwa kwe-MTO (Made to Order) kanye ne-JIT (Just in Time).
Lolu hlelo lusizakala kusibikezelo sezinyanga ezi-3 kuya kwezi-6 semikhiqizo eqediwe ukuze ikhasimende lingabi nayo imikhiqizo efunwayo. Akusizi nje kuphela ukugcina ukutholakala kwesitoko ngokuya ngemikhiqizo e-ikelwe yikhasimende, ebhekwa ngeviki noma ngenyanga kodwa futhi igcina obala ekusetshenzisweni kwemikhiqizo yanyanga zonke.
Ekuphetheni, iVendor Management Inventory ivumela ikhasimende ukuthi ligxile ekuthengiseni eminye imikhiqizo yalo, ngenkathi ligcina amathebhu ekutholakaleni kwempahla yabo kanye nokutholakala kwesitoko, kugcinwe ukusebenza kahle kanye nokuphendula ngokushesha kuma-oda.
Ziyini Izinzuzo ze-VMI?
1. Isisekelo Sokuqalwa Kwempahla
2. Izindleko Zokusebenza Eziphansi
3. Ubuhlobo Bomthengisi Oqinile